निदाउदाँ र्‍याल निस्किन्छ ? यसरी समाधान गर्नुहोस् - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
निदाउदाँ र्‍याल निस्किन्छ ? यसरी समाधान गर्नुहोस्
मेरो लाइफस्टाइल || 24 February, 2021
धेरै मानिसहरूमा निदाएको अवस्थामा मुखबाट र्‍याल निस्किने गर्छ । निदाएको बेला मुखवाट र्‍याल निस्किनुलाई वैज्ञानिक भाषामा एक्सोक्राइन ग्ल्याण्ड भनिन्छ । यो समस्या मानिस ब्यूँझिएको समयमा भन्दा निदाएको अवस्थामा हुने गर्छ । यो समस्या बालबालिकादेखि वयष्क ब्यक्तिहरुमा समेत निदाएको बेला हुने गर्छ । यसरी निदाएको बेला मुखबाट र्‍याल निस्किनुका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । जसमध्ये चिकित्सा विज्ञानले मुख्य रुपमा पाँच कारणहरुलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको माथिल्लो श्वास नलीमा संक्रमण छ भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई श्वास लिन र फाल्न समस्या हुन्छ । यो समस्याले उनीहरुको मुखमा र्‍याल जम्मा हुन्छ र बगेर बहिर निस्किन्छ ।
पेटमा ग्याँस भरिनु
अनुसन्धानका अनुसार पेटमा ग्याँस जम्मा भएपछी एसिड रिफ्लक्सका कारणले ग्याष्ट्रिक एसिड हुन्छ र यसले शरीरमा एसोफागोसालवरी सक्रिय भएर मुखमा र्‍याल जम्मा हुन्छ र बहिर निस्किन्छ ।
घाँटीको पछाडीको भाग टन्सिल ग्रन्थि हुन्छ । यो ग्रन्थी सुन्निएको अवस्थामा घाँटीको प्वाल सानो हुन्छ । जसको कारण र्‍याल घाँटीबाट तल जान सक्दैन जसको कारण र्याल मुखमा जम्मा हुन्छ र बहिर निस्किन्छ ।
खानपिन वा कुनै औषधीको सेवनले हुने एलर्जी गर्दा पनि निदाएको अवस्थामा मुखवाट र्‍याल बाहिर निस्कने गर्छ ।
गलत आसनमा सुत्दा
मुखबाट र्‍याल निस्किने समस्या सुत्ने आसन नमिल्दा पनि हुन्छ । निदाउदा घुर्ने समस्या भएका ब्यक्तिको पनि मुखवाट र्‍याल बाहिर निस्कन्छ भने उत्तानो परेर निदाउदा मुखवाट आएका र्‍यालहरु आफैं शरीर भित्र जान्छ ।
र्याल निस्किने समस्यालाई निर्मुल पार्ने घरेलु उपाय
– मुखबाट र्‍याल निस्किने समस्याबाट छुटकारा पाउन तपाईले दिनमा तीन–चार वटा तुलसीको पात चपाउदै थोरै–थोरै पानी पिउनुहोस् ।
– फिटकीरी पानीले दैनिक रुपमा कुल्ला गर्नाले पनि निदाउदा मुखवाट र्‍याल निस्कने समस्या समाधान हुन्छ ।
– निदाउदा मुखवाट र्‍याल निस्कने समस्या छ भने दालचिनीको चिया बनाएर सेवन गर्नुहोस् । यसको सेवनले र्‍याल निस्किने समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । दालचिनीलाई पानीमा उमालेर पानी छानेर निकाल्ने र मह मिसाएर पिउने गर्नुपर्छ ।
– यो समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईले अमलाको पाउडरको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ । खाना खाने वित्तिकै मनतातो पानीमा अमलाको पाउडर मिसाएर दैनिक पिउने गर्नाले पनि यो समस्या हटेर जान्छ ।
के र्‍याल निस्किनु कुनै समस्या हो ?
निदाएको अवस्थामा मुखवाट र्‍याल निस्किनुलाई चिकित्सकिय भाषामा सिलोरिया भनिन्छ । यो प्रायः दाँत, मांसपेशी र स्नायु सम्बन्धी समस्या भएका बालबालिकामा देखिने समस्या हो । मुखमा रहेको एक गन्थ्रीवाट र्याल निस्कने गर्छ । ब्यूँझिएको बेलामा भन्दा निदाएको बेलामा यस्ता गन्थ्रीहरुले बढी र्‍यालहरु उत्पादन गरिरहेको हुन्छ । ब्यूँझिएको बेलामा यसरी निस्किएको र्‍याल मानिसहरुले निलिरहेका हुन्छन् भने निदाएको बेला यस्ता र्‍यालहरु मुखवाट बाहिर निस्कने गर्छ ।